मानिस अनुहार नछोईकन किन बस्न सक्दैनन् ? – Butwal Sandesh
मानिस अनुहार नछोईकन किन बस्न सक्दैनन् ?
मानवलाई अन्य जीवभन्दा भिन्न देखाउने गुणमा अनुहार छुने स्वभाव पनि हो। आफूले थाहै नपाई अनुहार छोइराख्ने स्वभाव भएको सम्भवत: हामी एकमात्र प्रजाति हौँ। त्यो स्वभावले कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) जस्ता रोग फैलाउन सघाउँछ। हामी किन यस्तो गर्छौँ र हामीले यस्तो स्वभाव कसरी हटाउन सकिन्छ ?
हामीले बारम्बार आफ्नो अनुहार छोइराखेका हुन्छौँ। सन् २०१५ मा अस्ट्रेलियामा चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीहरूको स्वभावको अध्ययन गरियो। त्यति बेला उनीहरूमा समेत अनुहार छोइराख्ने बानी रहेको पाइयो। चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीहरू जोखिमबारे अरूभन्दा बढी सचेत हुनुपर्ने हो। तर सहभागीहरूले एक घण्टामा कम्तीमा २३ पटकसम्म आफ्नो मुख, नाक वा आँखा छोएको पाइयो।
विज्ञहरूका अनुसार त्यसरी अनुहार छोइराख्ने बानी खतरनाक हुन सक्छ। कोभिड-१९ बाट जोगिन हामीले आफ्ना हातलाई विश्राम दिने, धेरै नचलाउने र धेरै सफा गरिरहने सुझाव दिइएको छ।
यूसी बर्कलीका मनोविज्ञानका प्राध्यापक ड्याचर केल्ट्नरका विचारमा अनुहारलाई सहज बनाइराख्न हामीले हात प्रयोग गर्ने गरेका हुनसक्छौँ। तर अरू बेला हामीले थाहै नपाई अनुहार छोएर “जिस्किने वा सामाजिक नाटकको एक चरणबाट अर्को चरणमा प्रवेश गरिरहेका हुन्छौँ।” अन्य विज्ञहरूले हामीले आफैँलाई छोएर आफ्ना संवेग र ध्यानलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्ने गरेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
लाईप्सिग विश्वविद्यालय जर्मनीका मनोवैज्ञानिक एवं प्राध्यापक मार्टिन ग्रुन्वाल्ड भन्छन्, “यो हाम्रो प्रजातिको आधारभूत स्वभाव नै हो।” “आफैँलाई छुने स्वभाव कसैले कुनै सन्देश दिनको लागि बनाएको होइन, यो त प्राय: थाहै नपाई हुने गर्छ,” ग्रुनवाल्डले बीबीसीसँग भने। “यो स्वभावले हाम्रो सबै चेतनशील र संवेगात्मक प्रक्रियामा प्रमुख भूमिका खेल्छ। यो सबै मानिसमा हुने गर्छ।”
आफैँलाई छुने यस्तो स्वभावको एउटा समस्या के हो भने हाम्रा आँखा, नाक र मुखबाट खराब वस्तु वा कीटाणु सहजै हाम्रो शरीरभित्र पस्न सक्छ। उदाहरणका लागि कोरोनाभाइरस कुनै सङ्क्रमित व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा ससाना बिन्दुको रूपमा नाक वा मुखबाट सहजै प्रवेश गर्न सक्छ। हामीले त्यो भाइरस रहेको कुनै वस्तु वा सतहमा छोयौँ भने पनि सङ्क्रमण हुन सक्छ। थप अध्ययन जारी नै छ। तर वैज्ञानिकहरूका अनुसार त्यो भाइरस नौ दिनसम्म जीवित रहने गरेको पाइएको छ।
हामीले हातले आफ्ना अनुहार छोइराख्ने दर कम गर्न के गर्न सक्छौँ होला? कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा स्वभावबारे अनुसन्धान गरेका वैज्ञानिक माइकल हल्स्वर्थ भन्छन्: सल्लाहसुझावलाई व्यवहारमा बदल्न निकै गाह्रो हुन्छ। “मानिसले थाहै नपाई गर्ने गरेको कामलाई रोक्नुहोला भन्नु आफैँमा एउटा समस्या हो,” उनले भने। “अनुहार ‘नछुनू’ भन्नुभन्दा पनि मानिसलाई हात धोइराख्नू भन्न सजिलो हुन्छ।”
हल्स्वर्थका विचारमा हामीले आफैँलाई छोइराख्ने कारण पत्ता लगाएर पनि समाधाननजिक पुग्न सकिन्छ। “हामीले छुनुपर्ने कारणहरू पत्ता लगाएर पनि त्यसको समाधान निकाल्न सक्छौँ,” उनले भने। “आँखा छोइराख्नुपर्ने मानिसले घामचस्मा लगाउन सक्छन्।” “अथवा हातमाथि नै बसिदिँदा हातले अनुहार छुने क्रम घट्ला।”
जो*खिमबारे आफैँलाई सम्झाइरहने गर्नाले पनि स्वभाव बदल्न सहयोग पुग्न सक्छ। “यदि कसैमा कुनै स्वभाव डरलाग्दो छ भने साथी वा आफन्तलाई त्यसबारे आफूलाई चेतावनी दिइरहन सुझाव दिएमा पनि सहयोग पुग्न सक्छ,” हल्स्वर्थले भने। पन्जा लगाउँदा के होला? बारम्बार नधुने वा नफेर्ने हो भने त्यो झनै फोहर र सङ्क्रामक हुन सक्छ।